FreeOffice 5.3 inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
FreeOffice 5.3 inowanikwa
Tine nhau dzakanaka dzevadi vemahara software. Iyo hofisi suite yekushandisa mahara par kugona yakagadziridzwa. Iyo LibreOffice, iyo yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.3 ine yakakosha maficha maficha.
Iyi vhezheni Izvo zvave kuvandudza kubva muna Gumiguru uye ivo vakafanirwa kushandisa mana akareba mwedzi yekusimudzira kusvika iyo yekupedzisira vhezheni yaona mwenje. Kubudirira kwatora nguva yakareba nekuda kweye yakawanda bug cheki inoitwa neThe Document Foundation timu, chimwe chinhu chakanyatso kukosha kana tichizove neyakagadzika uye isina chikanganiso-application gare gare.
Pakati penyaya dzakakosha kwazvo isu tine iyo Muffin interface, yataitofungidzira zvishoma mune ino chinyorwa. Iyi interface inobvumidza yakanyanya kugadzirisa kupfuura iyo yapfuura interface, chimwe chinhu chiri chokwadi chikuru nhau.
Muffin ichaunza nemhando ina dzekupindirana, iyo inoshandura manyorerwo ayo zvinhu zvechidzitiro zvinoratidzwa, senge taskbar. Ehezve, Muffin achiri muchikamu chekuyedza uye hazvingashamise kana paine shanduko munguva pfupi.
Uyewo zvimwe LibreOffice maficha akagadziridzwa, senge kusanganisa kwetafura nyowani masitaira, kuenderana neODF 1.2 uye rutsigiro rwezvikamu uye maturusi matsva ekuveza muLibreOffice Dhirowa Uye zvakare, akawanda marongedzero akawedzerwa kune iyo suite's Math chirongwa, pamwe nekuwedzera kune inoenderana PDF.
Pasina kupokana LibreOffice inoramba ichitishamisa zvinofadza nekufamba kwenguva. Mumakore mashoma, zvakabva pakuva chirongwa-chakashandiswa-chidiki kuenda pakuva imwe nzira huru kuMicrosoft Office, iine anenge akafanana mashandiro seichi.
Kuti utore pasi, tinya pane iyi link pano, maunogona kurodha pasi chirongwa ichi cheako kufarira mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FreeOffice 5.3 inowanikwa
Arch Linux 2017.02.1, ichangoburwa ISO mufananidzo wem 32-bit makomputa